Nkọwa:Ngwongwo na-anọchi anya,Mgbanwe nke Hps,Ngwongwo na-anọchi anya maka metal Halide
Home > Ngwaahịa > Mgbanwe Ngwunye nke Mmiri nke Ọkpụkpụ > 175w Metal Ride Replacement > 60W Na-akpụkwa Lamps maka Metal Halide 175W
Ihe Nlereanya.: BB-HYD-60W-D
Tụlee na ndị ọzọ dị ọnụ ala karịa Dugara Nnọchi Oriọna , Mgbanwe anyị na Hps jiri ike na-arụ ọrụ na-emepụta ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ na windo na-emepụta ihe ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ na steeti, onye ọkpụkpụ dịpụrụ adịpụ dịpụrụ adịpụ na onye nchebe nsị. Ngwa Osimiri anyị 5000K maka Metal Halide na isi E39 Mbụ dị mfe ịwụnye. Iji weghachite nkwekọrịta ọkụ oge ochie gị na nnọchi mpi nke anyị na- eduzi bụ atụmatụ kachasị mma, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka eletrikiiki ma ọ bụ ọbụna nweere onwe ya ma ka na-ejigide ọdịdị ọdịdị.
Nke a 60W na- eduzi bọtịnụ ndochi maka zoo emepụta ruo 7200 Lumens na 120lm per watt dị ebube na-eme ka e nwee ọhụụ dị ebube. Na-agbanwe 175W Metal Halide Bulb / HPS / HID with 60w convert mercury vapo na-edu na ọ dịghị arụzi chọrọ n'oge awa 50,000 ndụ. Oge ndụ nke 50,000 awa dị 4 ugboro karịa MH ma ọ bụ HID bulbs.
Ngwongwo na-anọchi anya Mgbanwe nke Hps Ngwongwo na-anọchi anya maka metal Halide Ngwongwo na-anọchi akwa ụlọ Ebube na-anọchi anya Ngwongwo na-anọchi anya ndị na-eme ka ọkpụkpụ Ngwongwo nke a na-agbanye azụ Ngwongwo Ntughachi Led